Global Scale Mapa | Fiaretana haran-dranomasina
Hatramin'izao, ny sarintany momba ny fizarana haran-dranomasina dia fanangonana avy amin'ny UNEP World Conservation Monitoring Center (UNEP-WCMC) sy WorldFish, miaraka amin'ny World Resources Institute (WRI) sy The Nature Conservancy (TNC). Ny loharanom-baovao dia misy ny Tetikasan'ny Millennium Coral Reef Mapping (IMaRS-USF sy IRD 2005, IMaRS-USF 2005), ny World Atlas of Coral Reefs (Spalding et al. 2001) ary ireo masoivohom-pokontany maro (oh: GBRMPA). Ny vahaolana avo indrindra amin'ny iray amin'ireo sarintany ireo dia 30 m mifototra amin'ny sary zanabolana Landsat. ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAllen Coral Atlas (Atlas) dia namorona sari-tany benthic sy sarintany geomorphic tamin'ny famaritana 5 m ho an'ny haran-dranomasina tropikaly manerantany ary hanome ny sarintanin'ny haran-dranomasina benthic voalohany amin'ny sehatra manerantany.
Matā'utu, renivohitr'i Wallis sy Futuna. Sary © Planet Labs Inc.
Inona ny Allen Coral Atlas?
Ny Allen Coral Atlas dia fitaovana fitahirizana haran-dranomasina niova lalao namboarina niaraka tamin'ny mpahay siansa haran-dranomasina, oniversite, ONG ary orinasa tsy miankina. Nantsoina ho an'ny mpiara-manorina sy mpanao asa soa an'i Microsoft Paul G. Allen ho fankasitrahana ny anjara asany lehibe amin'ny famelomana ny Atlas ary ny fanoloran-tenany amin'ny fitrandrahana ireo banga data ilaina hamahana ireo fanamby lehibe indrindra manerantany. Avy amin'ny sary zanabolana, fiaraha-miasa amin'ny Arizona State University sy ny University of Queensland (UQ), ny ekipan'ny Atlas dia mamorona sarintany haran-dranomasina sy foto-kevitra misy ny haran-dranomasina manerantany. Ny fomba fiasa manavao ny haran-dranomasina, novolavolain'ny ivon'ny Remote Sensing Research Center an'ny UQ, mamela ny haran-dranomasina tropikaly (ambany hatramin'ny 15 m) hamboarina sy sokajina. Ireo no sarintany hamboarina voalohany (5 m) amin'ny haran-dranomasina noforonina tamin'ny fampiasana fomba tsy miovaova eran'izao tontolo izao, izay manome ny sokajy geomorphic sy benthic. Ireo sarintany misy mirefy 5 m ireo dia azo ampitahaina amin'ny mizana eo an-toerana, nasionaly, isam-paritra ary manerantany.
Ny fomba tsy manam-paharoa an'ny Allen Coral Atlas amin'ny fanaovana sarintany vatoharan-dranomasina dia fitambaran'ny sary zanabolana, angon-drakitra lalina ary fanamarinana marina. Izy io dia mamorona sarintany haran-dranomasina avo lenta ary avo lenta manerantany izay sarobidy amin'ny fampiharana maro toy ny fiarovana ny haran-dranomasina, ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ary ny fiarovana ny zoro. Sary © Vulcan Inc.
Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny Atlas ianao, ao anatin'izany ny famaritana ireo fomba hamoronana ny sarintany misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEto.
Mampiasa ny Allen Coral Atlas
Ny tranonkala Allen Coral Atlas dia manasongadina ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitaovana an-tsarintany atlas interactive, manome ny fidirana amin'ny sary zanabolana, ny geomorphic ary ny sarintanin'ny haran-dranomasina benthic manerantany. Ny fitaovana fanaovana sarintany an-tserasera Atlas dia manome fiasa mamela ny famakafakana tsotra araka ny aseho amin'ny horonantsary etsy ambany.
Ny antontan-taratasy misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanasokajiana rakotra vatoharamanokatra fisie PDF mamaritra ny fanasokajiana ampiasaina amin'ny zonation geomorphic sy ny fanasokajiana benthic. Ny zonation geomorphic dia fintino amin'ity misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSary torohaymanokatra fisie PDF . Ny Atlas dia mamaritra ny fampiharana ny fahatsapana lavitra amin'ny fanaovana sarintany ny haran-dranomasina amin'ny mizana izay mahavaha olana nasionaly sy isam-paritra. Ny data dia mamaly ireo fanontaniana momba ny fitantanana lehibe, ohatra: "faritra aiza amin'ny haran-dranomasina no arovan'ny faritra arovana an-dranomasina (MPA)?". Ny sarintany geomorphic sy benthic an'ny Atlas dia azo ampiasaina amin'ny rindranasa fitantanana maro. Ohatra:
Fandrafetana ny habakabaka an-dranomasina amin'ny sehatra nasionaly sy isam-paritra
Fanaraha-maso sy fanombanana amin'ny sehatra nasionaly sy isam-paritra. Vakio ny fandinihana tranga etsy ambany
Famantarana ny faharetan'ny haran-dranomasina
Siansa / maodely: fifandraisana amin'ny haran-dranomasina sy ny fifandraisana amin'ny morontsiraka
Loza amoron-dranomasina sy famakafakana ny loza
Ny sarintanin'ny sokajy benthic sy geomorphic manerantany momba ny haran-dranomasina novokarin'ny ekipan'ny Atlas dia fanampiana an-tanan-drakitry ny tranombokin'ny sari-dranomasina misy. Ny sarintany haran-dranomasina novokarin'ny ekipan'ny Atlas no ho voalohany amin'ireo sarintany haran-dranomasina namboarina tamin'ny fomba mitovy, ary manome sokajy geomorphic sy benthic. Ireo sarintany misy mirefy 5 m ireo dia azo ampitahaina amin'ny mizana eo an-toerana, nasionaly, isam-paritra ary manerantany.
Fandalinana tranga: Fanaraha-maso sy fanombanana ireo haran-dranomasina voaro sy tamba-jotra MPA any Fidji
Ny komity teknika faritra arovana an-dranomasina (MPATC) dia mpanolotsaina ho an'ny Governemanta Fiji. Sary © Epeli Naukautoga, IUCN Oceania
Fiji dia nanolo-tena tamina tambajotram-pirenena misy faritra 30 tantanana / arovana an-dranomasina hatramin'ny taona 2020 tao amin'ny fivorian'ny Little Island Developing States tany Maurice (2005, nataon'ny Ministeran'ny raharaham-bahiny) ary nanolo-kevitra ny hanao izany tamin'ny fivorian'ny SIDIDA tany Samoa tamin'ny 2014 (Minisitra ny drafitra stratejika, ny fampandrosoana nasionaly ary ny statistika). Ity fanoloran-tena ity dia nohamafisina tao amin'ny Framework Green Growth Framework (2014) any Fiji, tao amin'ny United Nations Oceans Conference (Jona 2017) sy ny drafitra ho an'ny fampandrosoana nasionaly (2017).
Ny fanaraha-maso ny fandrosoana mifanohitra amin'ny tanjona 30% dia mitaky rafitra fanaraha-maso sy fanombanana izay misy ny sarintany haran-dranomasina izay azo ampitahaina amin'ny sehatra nasionaly.
Inona: Fanavaozana ny haran-dranomasina amin'ny fiarovana ara-dalàna
Iza no: Fijiana departemantan'ny tontolo iainana sy ny minisiteran'ny jono, Fiji Network an-toerana an-toerana (FLMMA), Union international for Conservation of nature (IUCN), Conservation International, World Wildlife Fund, and Wildlife Conservation Society
Sarintany Coral Reef: Sarintany bentika afrika sy geomorphika
Method: Fanadihadiana GIS. Ny fikajiana ny faritry ny haran-dranomasina any amin'ny faritra arovana any Fiji sy ny isan-jaton'ny haran-dranomasina arovan'ny FLMMA amin'ny ambaratonga eo an-toerana sy any amin'ny firenena.
Results: Fanadihadiana banga amin'ireo faritra mila fiarovana fanampiny sy famaritana ireo faritra manokana sy miavaka an-dranomasina (SUMA). Ity tatitra ity dia hanampy ny governemanta Fiji hahatratra ny tanjon'izy ireo 30% ny rano tantana ho tambajotran-dranomasina arovana amin'ny 2020.
Ahoana no fanatsarana ny Atlas an'ity dingana ity?
Tsy nisy sarintany ahidrano tao amin'ilay faritra. Ny sarintanin'ny benthika an'ny Atlas dia mameno ny banga ary manome rakotra ahitra tsy miovaova eraky ny firenena
Ny tsy fitovizan'ny sarintany dia manampy amin'ny fampitahana ireo faritra samihafa any Fiji
Ny sarintanin'ny benthika an'ny Atlas dia manana vahaolana avo kokoa (5 m) ary hanome tombana marina kokoa an'ireo toeram-ponenana
Vakio bebe kokoa momba ny hetsika Allen Coral Atlas: